Real Madrid oo Ka Badisay Kooxda Getafe iyo Ronaldo oo rikoor Cusub Dhigay “Sawirro” – Radio Muqdisho
Kooxda Getafe ayaa waxaa garoonkeeda Coliseum Alfonso Perez 0-3 uga badiyay kooxda Real Madrid.
Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa rikoor cusub ku qoryay buugaagta taariikhda ee kooxda Real Madrid,ka dib markii uu dhaliyay labo ka mid ah goolasha sedaxda ah.
Ciyaaryahan Ronaldo ayaa dhaliyay goolashii ugu badnaaa ee horyaalka Spain lagu dhaliyo meel ka baxsan garoonka kooxda Real Madrid ee Santiago Bernabeu.
Ciyaaryahankii hore ee kooxda Real Madrid Raul ayaa 87-gool oo horyaalka Spain ah ku dhaliyay meel ka baxsan garoonka kooxda Real Madrid,isagoo ku dhaliyay 271-kulan.
Ciyaaryahan Ronaldo ayaa 89-gool oo horyaalka Spain ah ku dhaliyay meel ka baxsan garoonka kooxda Real Madrid.isagoo ku dhaliyay 92-kulan.
Ciyaaryahan Ronaldo ayaa galabta dhaliyay goolashiisii 27-aad iyo 28-aad ee horyaalka Spian.
Ciyaaryahan Gareth Bale ayaa goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Real Madrid.
Kooxda Real Madrid oo uu hogaamiyo macalin Carlo Ancelotti ayaa horyaalka Spain ee La Liga ku hogaamineyso 45-dhibcood,halka kooxda Getafe ay horyaalka uga jirto kaalinta 15-aad,iyadoo leh 17-dhibcood.
Allaha u naxriistee Sheekh Cabdi Shiikhaal oo maanta geeriyooday